နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: လွယ်လွယ်လေး မှတ်လိုက်ရအောင်
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:20 PM
သက်ဝေ February 4, 2010 at 10:04 PM
ဘုရားရေ... သူပြောတော့ လွယ်လွယ်လေး တဲ့...
ဝေးဝေးမှာ ရှောင်နေမှ...း))
ချစ်ကြည်အေး February 4, 2010 at 10:29 PM
m February 4, 2010 at 11:00 PM
khin oo may February 5, 2010 at 12:44 AM
khin oo may February 5, 2010 at 12:45 AM
ငတို့ကတော့ တ. တလင်းချိတ်ဘဲ အသံထွက်တယ်။
Meredithjohns February 5, 2010 at 1:04 AM
. February 5, 2010 at 2:50 AM
မမေဓာဝီရေးဖူးတာကတော့.. “ဋသံလျင်းချိတ် (ဋခြေဆင်း) - သံလျင်းချိတ်နှင့် တူသော ဋ၊ ခြေဆင်းလျက်ရှိသော ဋ” ပါ။ :)
အကျယ်ကို ဤတွင် ရှူရန် -
Steve Evergreen February 8, 2010 at 4:29 AM
ဋ (ဋသန်လျင်းချိတ်)၊ ဌ (ထဝမ်းဘဲ)၊ ဍ (ဍရင်ကောက်) တွေကို အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ ထည့်ပြောမနေသင့်တော့ပါ ဆရာကိုဘ ခင်ဗျား
အဲဒါတွေက မြန်မာစာကနေ Obsolete စာရင်းသွင်း ဖို့လဲ သိတ်မလိုတော့ပါ
Ko Boyz February 8, 2010 at 9:47 AM
“မကိုဋ်”၊ “ဌာန”။ “မဇျိမ ပဋိပဋာ” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိနေ သုံးနေသမျှတော့ ဒီစာလုံးတွေကို Obsolete စာရင်းသွင်းစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး ဝေါဟာရ၊ စကားလုံး၊ အက္ခရာ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာစာက အက္ခရာများကို မလိုလို့ ဖြုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်မခံပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့ သူ အသုံးလေးတွေ ရှိလို့ ပေါ်လာတာကို ပြန်ဖျက်ဖို့ကို လက်သင့်မခံနိုင်ပါ ကို steve ခင်ဗျား။
:P February 21, 2010 at 6:00 PM
္ဂဂဃနဏသိအောင် ကဏ္ဍခွဲပြောပြထားတာကျေးဇူး ကုဋေကဋာပါ။
ဍ ကိုဘယ်နေရာတွေသုံးသေးလဲလို့ မေ့ကုန်ပြီ။